Indawo Yokuhlala Yeendwendwe YaseJalandra - I-Airbnb
Indawo Yokuhlala Yeendwendwe YaseJalandra
Beka iikhilomitha eziyi-150 ukusuka kwi-Murray Valley Highway, i-Jalandra inikezela ngendawo yokuhlala ecocekileyo netofotofo, ayinanto yakwenza nendlu ephambili, kodwa ke, iphantsi kophahla olufanayo. Indawo yokuhlala inendawo yokungena, ecaleni kwendawo yokupaka engaphantsi komhlaba enokusetyenziswa ziindwendwe.
I-Jalandra inikezela ngendawo yokuhlala ephucukileyo ekucocekeni nasezitofotofo. Indawo yokuhlala ihonjiswe ngezinto ezinokusetyenziswa ukuze ukuhlala kwakho kube yinto oyifunayo. Ndisoloko ndifumaneka ukuze ndincede nangayiphi na indlela endinokuyenza, kwaye ndifuna ukuhlala kwakho kube mnandi, kuphole kwaye kukhetheke.
Indawo yokuhlala inegumbi lokulala elinye elinomnyango ophumela ngaphandle, kwisicelo sakho iibhedi ezongezelelekileyo zinokulungiswa kwindawo esetyenziswa ngumntu wonke.
Ngaphantsi kwendawo endihamba kuyo ngemoto kukho umzila wololiwe weHigh Country. Lo mzila usetyenziselwa ukuhamba, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokukhwela amahashe. Ukusuka eJalandra umkhondo ungakuhambisa empuma ukuya kwi-Old Tallangatta okanye entshona kwi-Albury/Wodonga.
Sisondele kufutshane neLake Hume (malunga ne-1.5k kude), indawo entle yokuqubha, ukuhamba ngesikhephe kunye nokuloba. Ichibi yindawo entle enezinto zokoja neendawo zepikiniki. Ndingathanda ukuqaphela ukuba inqanaba lamanzi eLake Hume liyatshintsha ngamaxesha athile onyaka.
1.3k ukusuka eJalandra sisitrato esiPhambili saseTallangatta, sineehotele ezimbini, indawo yokubhaka, ivenkile yeentlanzi neetapile, iikhefi kunye neendawo zokuthenga.
5.0 · Izimvo eziyi-185
Sinezona zigqwesileyo macala onke, indawo evela kubamelwane kodwa uhambo olufutshane okanye oluya e-Tallangatta.
Siyakuvuyela ukunceda nangayiphi na indlela kwaye siza kukunceda nangayiphi na indlela ukuze uphole, kodwa uhloniphe iimfuno zeendwendwe zendawo yakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tallangatta